बैंकबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउँदा डुब्ने खतरा कम::Nepal's Digital Newspaper
बैंकबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउँदा डुब्ने खतरा कम
बिहि, मंसिर १२, २०७६
व्यवसायको लागि ऋण चाहिन्छ । ऋण नलिइकन व्यवसायी नै हुँदैनन् जस्तो लाग्छ ।
व्यवसायीले ऋण लिनुअघि र लिइसकेपछि धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । व्यवसायिक योजना बनाउने, योजनाअनुसार ऋण लिने र वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै ऋण तिर्ने हो भने उ कहिल्यै डुब्दैन । सफल हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा इमान्दारिता हो । ऋणको सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार पार्नुपर्छ । कुन व्यवसाय गर्ने, कति कामदार हुन्छन्, खर्च कति लाग्छ लगायतका कुरामा पहिल्यै प्रष्ट हुनुपर्छ । ऋण लिएर के के कुरामा सम्भावित खर्च हुनसक्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । ऋण लिएको पैसा व्यवसायमा लगानी गर्दा मासिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गर्नुपर्छ । ऋण कति लिने, कहाँबाट लिने, पैसा कसरी तिर्ने लगायतका योजना पनि पहिल्यै तयार पार्नुपर्छ ।
बैंकको छनोट गरेपछि ऋण लिने प्रक्रिया कति छिटो र सजिलो छ, ब्याज कति छ लगायतका कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । कति र के सम्पत्ति धितो राख्नुपर्छ, आफूसँग छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता, साँवा, ब्याज कहिले र कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
ऋण सानो पनि हुन्छ, ठूलो पनि । सहुलियत ऋण पनि छ । महिला, कृषि, विदेशबाट फर्किएकालाई, शैक्षिक कर्जा, भूकम्प पीडित लगायतमा सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ ।
ऋणको बारेमा प्रष्ट भैसकेपछि तपाईँले बैंकलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना बुझाउनुहुन्छ । तपाईँको योजना हेरिसकेपछि बैंकले तपाईंको कमाइ र तिर्न सक्ने क्षमता के कति छ भनेर हेर्छ । बैंकलाई तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा बैंकले बुझ्छ ।
तपाईंको आवश्यक कागजत दिएपछि ७ देखि १० दिनभित्र बैंकले ऋण दिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई जति आवश्यक हो, त्यति मात्रै ऋण लिनुहोस् । चाहिएकोभन्दा बढी ऋण नलिनुहोस् । लगानी गरेपछि फाइदा नहुने कुराको लागि ऋण नलिनुहोस् । बैंक यस्तो साथी हो कि तपाईँ सफल हुँदा या असफल हुँदा, जस्तो अवस्थामा पनि बैंकले साथ दिन्छ ।
तर ऋणको सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ । जे को लागि ऋण लिएको हो, त्यसकै लागि मात्र त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । व्यापार देखाएर कर्जा लिने अनि घर बनाउने र गाडी किन्नेहरु पनि छन् । त्यस्तो गर्न हुँदैन । व्यापार देखाएर गाडी, घर किन्ने गर्दा ऋणमा डुब्न सक्छ ।
केही मान्छेले समयमा किस्ता बुझाउनुहुन्न । फोन गर्दा पनि आउनुहुन्न । वित्तीय अनुशासनमा बस्न प्रयो । त्यसो हुँदा असफल भईंदैन ।
बैंकको ऋण आम्दानी होइन । कसैकसैले बैंकबाट ऋण लिएपछि त्यसलाई आम्दानीजस्तो ठान्नुहुन्छ । घर बेचेर या अरु केही गरेर भए पनि ऋण तिरिहाल्छु नि भन्नुहुन्छ । त्यस्तो होइन, तपाईंले जे को लागि ऋण लिनुभएको छ, त्यही व्यवसाय गरेर नै तिर्नुपर्छ ।
अनि जे को लागि ऋण लिएको हो, त्यही काम गर्नुपर्छ । अरु केही गर्नुछ भने बैंकले फेरि त्यसकै लागि ऋण दिन्छ नि । तरकारी खेती गर्छु भनेर ऋण लिने, तर त्यसले घर बनाउने गर्नुहुन्न । घर बनाउन ऋण चाहियो भने फेरि बैंकले त्यसमै लागि ऋण दिन्छ नि । होम लोन, अटो लोन, थरिथरिका लोन छन् ।
ऋण लिएर म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । समयमा तिर्नुपर्छ । समयमा तिर्ने गर्नुभयो भने बैंकलाई पनि विश्वास हुन्छ । स्टेटमेन्ट क्लियर छ भने उसलाई बैंकले जतिबेला पनि सहयोग गर्छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा बैंक तपाईंको साथी हो । तपाईंलाई कुनै व्यवसाय गर्नुछ भने बैंकले साथ दिन्छ, ऋण दिन्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले व्यावसायिक योजना बनाउनुहोस् । बैंकलाई दिनुहोस् । तपाईंको योजना हेरेर बैंकले ऋण दिन्छ । ऋण लिएर गैसकेपछि तपाईँ इमान्दार हुनुपर्छ, वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ । अर्थात् जे को लागि ऋण लिएको हो, त्यसमा मात्रै सदुपयोग गर्नुहोस् । समयमा तिर्नुहोस् । तपाईँ कहिल्यै असफल हुनुहुन्न ।
ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको डा.सन्तोष पौडेल
सिद्धलेक ५ चेपेमा महिला समुहद्धारा महिला समुहका सदस्यहरुलाई बाख्रा वितरण
सेवा प्रवाहमा थाक्रे गाउँपालिका उत्कृष्ट
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाद्धारा ७० करोड बार्गेनिङको आरोप लागेपछि दिए राजीनामा
धादिङको नीलकण्ठ मालेबगरमा सामुदायिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
गल्छी गाउँपालिकाद्धारा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा दिप प्रज्वलन (फोटो फिचर)